Archive du 20190531
Hosoka tamin’ny fifidianana Tsy hipetra-potsiny ny TIM
Haingana be ny tatitry ny SADC satria isika mbola ao anatin’ny fanangonana valim-pifidianana kanefa amin’ny vanim-potoana tahaka izao no tena miseho ny tsy fahatomombanana.
Andry Rajoelina Efa lasa mpaminany koa ve ?
Tsy fahamatorana sa efa diso mahatoky tena sahady ny filoha Rajoelina sy ny mpiara-dia aminy ? Fantatry ny mpikambana IRD sahady ny voka-pifidianana.
Kandidà depiote any Mahajanga Niray feo ka nametraka fitoriana
Nivondrona ho iray ireo kandidà solombavambahoaka nilatsaka hofidiana tao Mahajanga I amin`ny tsy fankasitrahan`izy ireo ny tsy nety rehetra nandritra ny fifidianana.
Fikambanana « Vondron’olon-tsotra » Avoahy ny voka-pifidianana tena izy
Nivoaka tamin’ny fahanginany omaly Ramatoa Sarah Zoe, filohan’ny fikambanana Vondron’Olon-Tsotra (VOT) manoloana ny havitsian’ny mpifidy tamin’ny alatsinainy 27 mey lasa teo.
Antoko Teza « Naloan’ny vahoaka ny rafitra politika eto. »
Efa niteny foana ny antoko politika Teza, hoy ny filohany Jean Louis Rakotoamboa fa maloto ny fitsipiky ny demokrasia eto Madagasikara,
Filohan’ny MMV Manahy fifamonoana faobe
Tsy mahagaga raha nalaina nifidy ny olona, hoy ny filohan’ny Manangana Madagasikara vaovao, Arlette Ramaroson. Ny fanadihadiana mikasika ny depiote malety aza tsy vita hatramin’izao.
Taham-pahavitrihana ambany “Baomba mipetraka mangina ho an`ny Filoha”
31% ny taham-pahavitrihan`ny mpifidy nandritra ny fifidianana solombavambahoaka ny 27 mey lasa teo.
Ady ara-barotra Miha mafy ny fifandonan’ny Amerikanina sy ny Sinoa
Efa herintaona mahery izao no nisian’ny ady ara-barotra teo amin’ny Etazonia sy sina ary miha-mafy hatrany izany ankehitriny indrindra taorian’ny nanambaran’ny filoha amerikanina Donald Trump ny fanakanana mahakasika ny fivarotana ny vokatra Huawei any Etazonia.
Salvador Ahiana handalovan`ny Tsunami
Nisahotaka ny mponina tany Salvador, omaly alakamisy tamin`ny 11 ora antoandro noho ny fisian`ny horohorontany.
Fiaraha-mitantanana Mitaky fifidianana vaovao ny parlemantera isaraelianina
Tsy mbola tafapetraka mihitsy ny fiaraha-mitantana ao Israely, taorian` ny fandresen` ny antoko havanana ny fifidianana solombavambahoaka ny volana aprily lasa teo ka naleon` ny praiministra Benjamin Netanyahu namerina ireo Israelianina mifidy ny 17 septambra ho avy izao
Fifaninana ara-barotra Sina-Etazonia Miditra an-tsehatra hatramin`ireo mpanao gazety
Miha mafy hatrany ny ady eo amin`ny firenena Etazonia sy Sina satria na ny mpanao gazety aza miditra an-tsehatra. Mpilaza vaovao amerikanina,